Sumowga Dhiiga (Sepsis) Gaaldiid
Sumowga Dhiiga (Sepsis)
Bogga Hore > Causes > Sumowga Dhiiga (Sepsis)
Sumoga dhiigu waa xanuun halis ah oo naadir ah waxaana sababa bakteeriya soo gasha dhiiga. Marka bakteeriyadu soo gasho dhiiga waxa jirku isku deyayaa inuu is difaaco taas oo keenta in uu qofku bukoodo.
Dhiigu waxa uu ku sumoobi karaa ayadoo bakteriya soo gasho tusaale ahaan bakteriya soo gasha kaadi mareenka, maqaarka ama sanbabada. Sidoo kale bakteeriyadu waxay jirka ku geli kartaa marka ruuxu sameeyo qalliin sida qalliinka wadnaha ama xubno kale oo jirka ah.
Dadka waayeelka ah waxa daciifa nidaamka difaaca jirka sidaa awgeed halista dhiigoodu inuu sumoobo sare ayey u kacaysaa. Sumowga dhiigu waxa uu ku yimaadaa si dhakhso badan, saacado yar gudaheed, waxaanu sababi karaa dhimasho ama halis aad u wayn. Laakiin nasiib wanaag waa xanuun la daawayn karo oo laga caafimaadi karo hadii sifiican loo daaweeyo.
Dadka qaar waxay aaminsanyihiin in xariijimaha cascas ee maqaarku yihiin calaamado lagu garto dhiiga sumoobay balse xariijimaha waxa sababa cuncun ku yimaada marinda dhiiga.
Sida caadiga ah, calaamadaha sumowga dhiigu waa kuwo ku yimaada si dhakhso badan.
Neefta oo ku qabata.
Calool xanuun iyo shuban.
Finan ama furuuruc.
Hadii aad qabto xanuunka sumowga dhiiga waxa lagugu daryeelayaa cusbitaalka dhawr todobaad. Waxaana lagu siinayaa daawooyin badan oo antibiyootig ah oo jirka lagu durayo/mudayo iyo sidoo kale dawooyin kale. Marka halista cudurku hoos u dhacdo waxaad qaadanaysaa daawooyin kaniino ah.